Mourinho oo mar kale daan daansaday Rafa Benitez kuna digtay! – Gool FM
Mourinho oo mar kale daan daansaday Rafa Benitez kuna digtay!
(Madrid) 13 Maajo 2016. JOSE MOURINHO waxa uu halkiisii ka sii ambaqaaday dagaalkii afka ahaa ee uu kula jiray Rafa Benitez kaddib markii la weydiiyey aragtida uu ka qabo ololaha kala ceynka ah ee kolkan soo maray Real Madrid.
Real Madrid ayaa shaqada ka eriday Benitez 7 bilood oo qura markii uu xilka tababare yahay kaddib markii uu waayey kalsoonida ciyaaryahano fure ah kooxda sida Cristiano Ronaldo iyo waliba jamaahiirta Bernabeu.
Tababarihii hore ee Liverpool iyo Chelsea waxaaa hada horyaalka heerka labaad uga dhacday Newcastle, shaqadiisa shaki ayaa ku jira.
Marka dib loogu laabto La Liga, Zinedine Zidane oo badalay ayaa Los Blancos ku hogaamiyey fiinaalihii labaad ee ay garaan saddex sano halka ay kaalinta labaad uga jiraan horyaalka oo uu kulan ka harsan yahay – Raja ayey la leeyihiin qaadistiisa, waa hadii ay Barcelona kufto.
Mourinho waxa uu mar kale ku digtay Rafa isaga oo sheegay hadii Real ay guul ka gaarto Europe in lagu ilaawi doono mashaqooyinkii bilowga ololaha.
Waxa uu yiri: “Zidane xilli dambe ayuu yimi waliba bartamaha xilli ciyaareedka laakiin fure ayuu u ahaa is badalka kooxda.
“Zizzou waxa uu kooxdiisa geeyey fiinaalaha Champions League – koox qaab kala ceyn ah ku bilowday xilli ciyaareedka waxa uuna siiyey fursad aad u weyn oo ay ku bad baadin karaan ololaha.
“Hadii Zidane ku guuleysto Champions League, markaa qof waliba wuu ilaawi doona dhibaatooyinkii kooxda soo baray kahor ciida Chrismas-ka inta uusan is badalka dhicin, xusuustaas waxaa badali doona guusha koobkii Europe ee 11-naad.”
Chelsea oo joojisay xafladii sagootinta kabtan John Terry (Maxaa dhacay?)
Roy Hodgson oo loogu baaqay in uusan ka tagin Marcus Rashford